သယ်ဆောင်မီးစက်, သယ်ဆောင်လျှ်စစ်မီးစက်, မီးစက်
- တောင်တက်များ (သို့) လျှပ်စစ်ဓာတ်အားအများကြီးမသုံးသည့်ဆိုင်ငယ်လေတစ်ဆိုငတို့အတွက် သင့်လျော်သောမီးစက်
လျှပ်စစ်မီးစက်မော်ဓယ် D1000 IS D2000 IS D2500 IS D4000 ISR
လျှပ်စစ်မီးစက်အမျိုးအစား အသံမဲ့သယ်အိတ် အသံထိန်းသေတ္တာ
ဒိုင်နာမို Single Phase
အမြင့်ဆုံးမီးပါဝါ 1.1 KVA 2.0 KVA 2.2 KVA 4.0 KVA
ပုံမှန်အသုံးပြုသည့်မီးပါဝါ 1.0 KVA 1.6 KVA 2.0 KVA 3.5 KVA
လျှပ်စစ်ဖိအား ပြောင်းစနစ် 50 Hz 230V.
60 Hz 120/240V.
လျှပ်စစ်မီးနှုန်း (A) 4.578.7 12.2
လွ်ပ္စစ္ဖိအား တိုက္ရိုက္စနစ္ 12V.DC 8A 12V.DC 8A
ဆလင်ဒါအရွယ်အစား 54 CC. 80 CC. 98 CC. 224 CC.
စက်အမျိုးအစား ဒီဇယ်အင်ဂျင်, စက်စုပ် 1 စုပ်4ခု/ လေအားဖြင့် အအေးပေးစနစ်
စက်ဖွင့်စနစ် ကြိုးပြန်ရန် စကရင်ကြိုး
မီးကြိုးနှင့်ပလပ် သုံးစွဲရန် အပေါက်ရှိသည်။ USB 5V DC / Parallel Operation Outlets
သုံးစွဲမှုအတွက် မီးပလပ်ကိရိယာ 1 Position2Positions
လောင်စာဆီတိုင်ကီအရွယ်အစား3L. 4.5 L. 4.5 L. 13 L.
အသုံးပြုချိန်ကာလ4Hr.3Hr.3Hr.3Hr.
သုံးစွဲသည့်အသံ7m./50% load 61 Decibel 62.5 Decibel 62.5 Decibel 61 Decibel
အရွယ်အစား 505x310x430 500x285x455 500x285x455 640x460x520
(အရှည် x အကျယ် x အမြင့်)
အသားတင်အလေးချိန် 15 Kg. 21 Kg. 21 Kg. 38.5 Kg.